Kulanka caawa ee Chelsea iyo Liverpool - BBC News Somali
Kulanka caawa ee Chelsea iyo Liverpool
16 Sebtembar 2016
Muuqaal kooban oo ku saabsan xifaaltankii waaydan dambe dhaxmaray Chelsea v Liverpool
Labada koox ee Chelsea iyo Liverpool ayaa caawa isaga hor imaan doona kulan ka tirsan Horyaalka England , ciyaar ka dhici doonta garoonka Stamford Bridge ee galbeedka magaalada London.
Warbixinta labada koox
David Luiz ayaa ciyaari doona kulankisii ugu horeyay ee Chelsea tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay kooxda, laacibkan ayaa £34m kaga soo tagay Paris Saint-Germain xagaaga.
Wuxuu badali doonaa kabtan John Terry oo dhaawac uu ka soo gaaray anqawga ciyaartii ay wajaheen Swansea horaantii asbuucii lasoo dhaafay.
Difaaca kooxdda Liverpool Dejan Lovren ayaa la filayaa in uu dib ugu soo laabto kooxdiisa ciyaarta ay iskaga hor imanayaan Chelsea kaddib markii nabar isha ah uu ku seegay ciyaartii ay kooxdiisu 4-1 ku garaacday Leicester.
Waxaa sidoo kale dib loogu yeeri karaa Philippe Coutinho oo nastay kulankii Liverpool iyo Leicester kadib safar dheer oo uu kaga yimid Brazil.
Maxey ka yiraahdeen macalimiintu ciyaarta ka hor ?
Macalinka Chelsea Antonio Conte: " David Luiz wuxuu noo ciyaari doonaa kulankiisii koobaad waana ku kalsoonahay, waxaana ka rajeyneynaa in uu si wanaagsan u ciyaaro waana dareen fiican, waa naqaanaa David waa ciyaariyahan fiican.
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp oo ka hadlay xidiga Chelsea Diego Costa: "Waa dagaalyahan dhab ah marka lagu jiro garoonka, wuxuu isticmaalaa jirkiisa markasta taasina waa tayo, ugu yaraan wuxuu ahaa mid aan la joojin karin ciyaartii aan la dheelnay Swansea.
"Waa xidig heer sare ah waana waxa ugu wanaagsan ee taageerayaasha kubadda cagta dhihi karaan ee adiga kugu saabsan.
"Xili ciyaareedkii la soo dhaafay ma'aheyn xili ciyaareedkii Chelsea, hadda dib ayey ugu soo laabteen garoonka, sidaa darteed waxaan u baahanahay in aan diyaar u noqono hardan dhab ah".
Chelsea ayaa garaacday Liverpool labo jeer oo kali ah sagaalkii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka oo ay ku kulmeen Stamford Bridge halka afar kulan laga badiyay, saddex kulana waxay galeen barbaro.
Kani waa kulankii 175-aad ee labada koox dhex mara, Liverpool ayaa badisay 75 jeer halka Chelsea ay badisay 61 kulan waxaana ay barbar-dhac galeen 38 kulan.